Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Arbaco Ah 1 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Arbaco Ah 1 June
June 1, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha Maanta oo aad Maalin kasta kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com.
Manchester United ayaa ka fiirsaneysa inay si lama filaan ah ugu dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea iyo England Mason Mount, oo 23 jir ah, kaasoo aan weli qandaraas cusub u saxiixin Stamford Bridge.Sun
Liverpool ayaa raadineysa weeraryahanka Rennes ee Faransiiska Martin Terrier, oo 25 jir ah, si uu u noqdo bedelka Sadio Mane, haddii 30 jirka reer Senegal uu ka tago Anfield. Mirror
Manchester United ayaa raadineysa heshiis ay kula soo saxiixaneyso weeraryahanka reer Uruguay ee Benfica Darwin Nunez, oo 22 jir ah, kaasoo lagu qiimeeyo 68 milyan ginni. (Talksport)
Newcastle ayaa qarka u saaran inay dalab ka gudbiso weeraryahanka Everton Dominic Calvert-Lewin, iyadoo Manchester United iyo Arsenal ay sidoo kale muujiyeen xiisaha ay u qabaan 25 jirka reer England. (Muraayad)
Real Madrid ayaa ku dhaw in ay Monaco kala heshiiso 22 jirka khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka France ee Aurelien Tchouameni kaas oo diiday dalabyo uga yimid kooxaha Liverpool iyo Paris St-Germain. Goal
Rajadii Manchester United ee saxiixa Frenkie de Jong ayaa u muuqata mid soo idlaatay ka dib markii 25 jirka reer Holland uu doortay inuu sii joogo Barcelona. (Waqti – is-diiwaangelinta ayaa loo baahan yahay)
Tottenham ayaa kula tartameysa Nottingham Forest saxiixa 21-jirka Middlesbrough ee daafaca dambeedka midig ee England ee U21 Djed Spence, kaasoo xilli ciyaareedkii hore amaah ku joogay City Ground. Telegraph
Tababaraha Barcelona Xavi ayaa wadahadalo la yeeshay kooxda Wolves iyo xulka qaranka Portugal ee Ruben Neves, oo 25 jir ah, isaga oo kala hadlay suurtogalnimada uu ku soo wareegi karo. Sport – Isbaanish
Juventus ayaa weli dooneysa daafaca reer Spain iyo kooxda Manchester City Aymeric Laporte, oo 28 jir ah. Manchester Evening News
Daafaca bidix ee Manchester City iyo Ukraine Oleksandr Zinchenko, oo 25 jir ah, ayaa xiiseynaya labada Everton iyo Newcastle. The Athletic
West Ham ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto daafaca Rennes Nayef Aguerd. Hammers ayaa sidoo kale isku dayday saxiixa 26 jirka reer Morocco xagaagii hore. Evening Standard
Arsenal ayaa weli xiiseyneysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leicester Youri Tielemans iyadoo 25 jirka reer Belgium la filayo inuu ka tago kooxda xagaagan, laakiin labo kooxood oo kale ayaa sidoo kale ku jira tartanka.Fabrizio Romano
Chelsea ayaa dib u soo celisay xiisihii ay u qabtay 21 jirka Barcelona iyo USA ee Sergino Dest. Mail
Wakiilka Miguel Almiron ayaa ku adkeysanaya in 28-sano jirkaan weerarka ka ciyaara ee Paraguay uusan ka tagi doonin Newcastle United xagaagan, iyadoo qandaraaskiisa lagu burburin karo 60 milyan ginni. Chronicle Live
Inter Milan ayaa wadahadalo la yeelan doonta qareennada weeraryahanka Chelsea Romelu Lukaku, oo 29 jir ah, si ay u sahmiyaan ku laabashada Serie A ee xiddiga heerka caalami ee dalka Belgium. Guardian
Goolhayaha reer Georgia ee Giorgi Mamardashvili, oo 21 jir ah, oo haatan ku sugan Valencia, ayaa isha ku haya Tottenham. Marca
Leeds United ayaa 10 milyan ginni kula dagaalami doonta kooxda Bundesliga ka dhisan ee Borussia Dortmund si ay ula soo saxiixato daafaca midig ee xulka qaranka Denmark Rasmus Kristensen, oo 24 jir ah, kana tirsan Red Bull Salzburg. Mail
Brentford ayaa sidoo kale isku dayaysa inay Kristensen ku darto ciidamadooda Danishka. Sun
Liverpool ayaa qarka u saaran inay Leeds ku garaacdo saxiixa 18 jirka daafaca uga ciyaara Scotland ee Calvin Ramsay kaasoo ka tirsan Aberdeen. (Leeds Live)
Barcelona ayaa heshiis amaah ah uga dhigtay daafaca heerka caalami ee dalka France Clement Lenglet, oo 26 jir ah, iyadoo ay xiiseynayaan kooxo badan oo Premier League ah. Sport- Isbaanish